दैवले जान्ने सरकारको ट्राफिक नियम ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दैवले जान्ने सरकारको ट्राफिक नियम !
दैवले जान्ने सरकारको ट्राफिक नियम !
पुस १४ गते, २०७६ - १२:४४
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न सक्छन्, राजाको पालादेखी चलिआएको नियमलाई लिएर अहिलेको सरकारलाई आरोप लाउने ? सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भन्न सक्छन्, पुरानो कुरा उठाएर दुई तिहाइलाई हेप्नी ?
काठमाडौं देशकै पुरानो महानगर, महानगर निदाएको पनि धेरै वर्ष भयो । झट्ट हेर्दा लाग्छ, यो उठिहाल्दैन । धुलो, धुवाँ, फोहोर, जाम र लथालिंग खाएर होला, मज्जाले घुरेर सुतेको छ ।
काठमाडौं महानगर उठ्न त चाहेको छैन् र उसको चाहनालाई मलजल गर्ने गरि केन्द्रिय सरकारले उसलाई थप लठ्ठ पार्ने औषधिको सुई थपिदिएको छ । भित्रि, यथार्थ र सबै नीतिगत मिलेमतो थाहा हुनेकुरा भएन तर व्यवहार नै सम्बन्धको अन्तिम परिणाम हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले मान्न सकिन्छ ।
निदाएको काठमाडौंमा गजबको ट्राफिक नियम
यातायात व्यवसायीसँग मिलेर सरकारले आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गरिरहेको छ । सरकारले त्यसै किन कानुन उल्लंघन गर्छ ? सायद काठमाडौंको यातायात व्यवस्था लथालिंग बनाईरहन सरकारले ठुलै कमिशनको खेल खेलिरहेको छ । यो मैले व्यवहारमा देखेको शंकास्पद आरोप हो र यसको छानविन गर्ने दायित्व मेरो पनि हो तर कानुन मेरो हातमा छैन् । मलाई केवल शंका गर्ने अधिकार छ ।
काठमाडौं निदाएको बेला पारेर होला, यहाँका ट्राफिक प्रहरीले नियम नै फेरेछन । अचम्म के भने यहाँ मान्छे नमर्ने बेलासम्म बसमा कोचेर खाँद्न पाइने, गुडाउँदा ढोका लाएपछि नियम मानेको ठहर्ने ।
ड्राइभर सिट नजिक बाहेक ट्याम्पोमा ढोका लाउने र खोल्ने चलन हुँदैन् । काठमाडौंमा चल्ने ट्याम्पोमा बढिमा ११ जनासम्म बस्न मिल्छ, तर ट्राफिकले ट्याम्पोलाई गज्जबको नियम के बनाइदिएछ भने, पछाडी पट्टी मिल्नेजति झुण्डीन पाइने तर एउटै सर्त टाउको भित्र छिराउन पर्ने ।
ट्राफिकले भन्ला ‘कहाँ हामीले त्यस्तो नियम बनाउनु ? यो ठाडो मिथ्या आरोप हो ।’ जवाफ भाषण, ब्रुसर र सुचनामा होईन व्यवहारमा हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ कि काठमाडौंका सडकमा ट्राफिक प्रहरीले कुन नियम लागु गरेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले दिनभरि धुलो र घाम खाएर चोकको जाम हटाउने काम गरेको छ । आफ्नो स्वास्थ्यलाई धारमा राखेर जनताको सेवा गरेको छ । सायद कति धेरै ट्राफिक प्रहरीहरुको यो पेशाले नै गर्दा फोक्सो बिग्रेको होला । म ट्राफिक प्रहरीको कामदेखी नतमस्तक छु ।
तर ट्राफिक प्रहरीको काम के हो र के भइरहेको छ ? यो सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने अधिकार जो सुकैलाई छ । भद्रकाली र थापाथलीका केहि ठाउँमा लेन मिच्दा ट्राफिकले समाइहाल्छ । मोटरसाईकलमा तिन जना उमेर पुगेका मान्छेहरु चढेको देख्यो भने पनि समाउँछ । बाहेकका अरु काम प्रायः गर्दैनन् । सायद सरकारले त्यहाँभन्दा बढी काम ट्राफिकलाई नै गर्न दिँदैन ।
गाडि किन्ने बेलामा गाडि खरिद गर्नेले सिट अनुसारको राजस्व बुझाउने नियम किन बनाएको हो ? गाडिको सिट क्षमताभन्दा बढि यात्रु बोक्न पाईने व्यवस्था सरकारले कसरी लागु गरिरहेको छ ? सरकारले कानुन लागु गर्न दिएन कि, प्रहरीले लागु गरेन ? आम यात्रुलाई सरकार व्यवसायि मिलेर लुट्ने काम भइरहेको छ । यदि सरकारले यसलाई स्विकार गर्दैन भने देखाओस उपभोक्ता हित संरक्षण गरेर ।
मैले एकपटक फेसबुकमा स्टाटस लेखें, ‘भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई, नेपाल यातायात चढाएर बालुवाटार र सिंहदरवार हिँडाउन पाए काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा केहि चेत्थे कि ?’ मलाई थाहा थियो मेरो स्टाटसले त केहि हुनेवाला थिएन, त्यो मेरो मनको शान्ति मात्रै थियो । मैले लेखेँ र केहि मन हल्का बनाएँ ।
सडकमा मन्त्रीको दादागिरी
कुनै एकजना बिमारी मान्छे, समयमा अस्पताल पुग्नुपर्छ । सडक जाम वा अरु कारणले ढिला भयो भने केहि मिनेटको कारणले उसको ज्यान पनि जान सक्छ । एम्बुलेन्सले आकश्मिक साइरन बजाएर बाटो खाली गर्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ दौडने कुरालाई सबैले स्विकार गर्नुपर्छ, किनकी त्यहाँ कसैको जीवनसँग सवाल छ । तर मन्त्रिहरुले काठमाडौंमा साइरन बजाएर बाटो खाली गराउने कुरा चाहिँ गजबको र लाजमर्दो छ । मन्त्रिहरु राज्यको कार्यकारी निकायका प्रमुख हुन् । उनीहरुसँग आफ्नो बिभागको आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने दायित्व छ ।
तर हाम्रा मन्त्रिहरुले आफ्नो दायित्व अनुसार काम गरेका छैनन् । हाम्रा मन्त्रिहरुको दैनिकी सबैले छर्लंगै देखेका छौं, कि यि मन्त्रीहरु राज्यको कार्यपालिकाका मन्त्रीहरु हैनन्, यि त राज्यले बिभिन्न कामको लागि उद्घाटन र शिलान्यास गर्न बनाएको हो । यो यिनको कामले देखाएको कुरा हो ।
बालुवाटार, सिंहदरवार र क्वाटरसम्मको यात्रामा यिनिहरुको कहिल्यैपनि आकश्मिक यात्रा छैन् । यहि सरकारको करिब २ वर्षको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने मन्त्रीको आकश्मीक यात्रा हामीले कुनै सञ्चार माध्यममा कहिल्यै पढेनाैं । मात्रै उद्घाटन र शिलान्यास पढ्यौं ।
हामी बाटोमा जामले बसिरहेका हुन्छौं कुनै मन्त्री झण्डावाल गाडी लिएर ट्वाँ­ट्वाँ गर्दै आउँछ र सबैलाई पाखा लाएर जान्छ । तर उ कहिँ जाँदैन क्वाटर, सिँहदरवार, उद्घाटन, सिलान्यास वा कसैसँगको सामान्य भेटमा पुग्छ । सिँहदरवारदेखि क्वाटरसम्म मन्त्रीको उठबस र भेटघाट हुन आउने मान्छेहरुको ताँति देखेरै यो विषय प्रमाणित हुन्छ ।
अति साधारण विषय र अनावश्यक विषयहरुमा दैनिकी गुजार्ने मन्त्रीले किन आकस्मिक साइरनको प्रयोग गर्छ ? यो दासयुग र सामन्तवादी युगको मालिक र महाराजाहरुको युग त होइन तर, हामी जनताभन्दा फरक हौं भनेर देखाउनको लागि मन्त्रीहरुले देखाउने साइरन दादागिरी कहिले रोकिने ? त्यसैले पुरानै उखान दोहोर्याउन मन लाग्छ, सरकारको कानून दैवले जानुन् !
पुस १४ गते, २०७६ - १२:४४ मा प्रकाशित